တရုတ် တို့၏ နောက်ဆုံး တရားဝင်ထုတ်ပြလိုက်သော အသေခံ ဒရုန်းများ… (ရုပ်သံ) - Pyit Time Htaung
တရုတ် တို့၏ နောက်ဆုံး တရားဝင်ထုတ်ပြလိုက်သော အသေခံ ဒရုန်းများ… (ရုပ်သံ)
By Pyit TimePosted on October 18, 2020
US က အစ္စရေး ဒရုန်းတွေ ဝယ်ပြတော့ သကောကလည်း အသေံခံဒရုန်းတွေ ထုတ်ပြီး အင်အားပြပြီ ….ဘယ်ဒရုန်းတွေက စစ်ပွဲမှာ အစွမ်းပိုပြနိုင်မလဲ….
အာမေးနီးယား နဲ့ အဇာရီ စစ်ပွဲမှာ အစ္စရေး ရဲ့ နာမည်ေ ကျာ် ကာမီကာဇီ ဒရုန်းတွေသည် လေကာစန စ်များများကို ထိုးဖောက်ပြီး အာမေး နီးယားတို့၏ တင့်ကားများ၊ ပစ်မှတ်များကို ဖျက်စီးပြခဲ့သည်။
တရုတ် တို့၏ နောက်ဆုံး တရားဝင်ထုတ်ပြလိုက်သော အသေခံ ဒရုန်းများ…
ယခုလည်း ထိုကဲ့သို့သော ဒရုန်းမျိုးနှင့် စွမ်းဆောင်ရ ည်ချင်းတူသည် ဆိုသော ဒရုန်းကို တရုတ်ကြီး က တရားဝင် ထုတ်ပြလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံအီလ က် ထရောနစ်နှင့်သတ င်းအချက်အလ က်နည်းပ ညာအက ယ်ဒမီ (CAEIT) သည်မောင်းသူ မဲ့မောင်းသူ မဲ့လေယာဉ် ၄၈ စီးအားကုန်တင် ကားနောက်ေ ကျာတွင်စမ်းသ ပ်မှုနှင့်ပတ် သက်သောဗွီဒီယို တစ်ခုကိုထုတ်ြ ပန်ခဲ့သည်ဟု The South China Morning Post မှဖော်ပြခဲ့သည်။
ထို ဒရုန်းကို CH-901 လို့အမည်ေ ပးထားပြီး လေပေါ်ပစ်လွှတ်လို က်ပြီး မြေပြင်ရှိ တပ်ဖွဲ့များက ထိန်းချုပ်ေ မာင်းနှင်၍ ဒရုန်းတို့၏ ပစ်မှတ်များကို တက်ဘလတ်ဖြင့် သတ်မှတ်ပေးကာ ပစ်မှတ်ရှိရာေ နရာကို ထိုးဆင်းဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီးနိုင်ကြောင်း သိရပါသည်။
ဒရုန်းတစ်ခုစီ သည် လေးပေရှည်ပြီး အလေးချိန် ပေါင် ၂၀ ရှိသည်။ လေထဲတွင် ၂နာရီ နေနိုင်ပြီး ပစ်မှတ် ဆီသို့ တစ်နာရီ ၉၃ မိုင်အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။
ဒီဇိုင်းမှာ US မှ ဒရုန်းထုတ် လုပ်သူ AeroVironment နှင့် Raytheon တို့တည်ဆော က်ခဲ့ေ သာဒရုန်းနှင့် အလားတူ ဒီဇိုင်းများနှင့်လည်းဆင်တူသည်။
သေချာသည်ကတော့ တရုတ် ထုတ်ဖြစ်သည့်အတွက် အစ္စရေး၊ တူရကီ ဒရုန်းတို့ထက် ဈေးသက် သာမည်ကတော့ အသေအချာပင်ဖြစ်ပါသည်။
၂၁ ရာစုခေတ်မှာ ဒရုန်းမ ရှိတဲ့စစ်တပ်ဟာ ကျောေ ကာ့အောင်ခံဖို့သာ ပြင်ထားကြပေတော့။ အသက်အပို မပါတဲ့လူတွေကို စစ်မြေပြင်လွှတ် တိုက်နေရတဲ့ဘ ဝတွေကနေ အမြန်ဆုံး ရုန်းထွက်ေ ကျာ်လွှားနိုင်ကြပါစေ။
US က အစၥေရး ဒရုန္းေတြ ဝယ္ျပေတာ့ သေကာကလည္း အေသံခံဒရုန္းေတြ ထုတ္ျပီး အင္အားျပျပီ ….ဘယ္ဒရုန္းေတြက စစ္ပြဲမွာ အစြမ္းပုိျပနုိင္မလဲ….
အာေမးနီးယား နဲ႔ အဇာရီ စစ္ပြြဲမွာ အစၥေရး ရဲ႕ နာမည္ေ က်ာ္ ကာမီကာဇီ ဒ႐ုန္းေတြသည္ ေလကာစန စ္မ်ားမ်ားကို ထိုးေဖာက္ၿပီး အာေမး နီးယားတို႔၏ တင့္ကားမ်ား၊ ပစ္မွတ္မ်ားကို ဖ်က္စီးျပခဲ့သည္။
ယခုလည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဒ႐ုန္းမ်ိဳးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရ ည္ခ်င္းတူသည္ ဆိုေသာ ဒ႐ုန္းကို တ႐ုတ္ႀကီး က တရားဝင္ ထုတ္ျပလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအီလ က္ ထေရာနစ္ႏွင့္သတ င္းအခ်က္အလ က္နည္းပ ညာအက ယ္ဒမီ (CAEIT) သည္ေမာင္းသူ မဲ့ေမာင္းသူ မဲ့ေလယာဥ္ ၄၈ စီးအားကုန္တင္ ကားေနာက္ေ က်ာတြင္စမ္းသ ပ္မႈႏွင့္ပတ္ သက္ေသာဗြီဒီယို တစ္ခုကိုထုတ္ျ ပန္ခဲ့သည္ဟု The South China Morning Post မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ထို ဒ႐ုန္းကို CH-901 လို႔အမည္ေ ပးထားၿပီး ေလေပၚပစ္လႊတ္လို က္ၿပီး ေျမျပင္ရွိ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ေ မာင္းႏွင္၍ ဒ႐ုန္းတို႔၏ ပစ္မွတ္မ်ားကို တက္ဘလတ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးကာ ပစ္မွတ္ရွိရာေ နရာကို ထိုးဆင္းေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
ဒ႐ုန္းတစ္ခုစီ သည္ ေလးေပရွည္ၿပီး အေလးခ်ိန္ ေပါင္ ၂၀ ရွိသည္။ ေလထဲတြင္ ၂နာရီ ေနႏိုင္ၿပီး ပစ္မွတ္ ဆီသို႔ တစ္နာရီ ၉၃ မိုင္အထိေရာက္ရွိႏိုင္သည္။
ဒီဇိုင္းမွာ US မွ ဒ႐ုန္းထုတ္ လုပ္သူ AeroVironment ႏွင့္ Raytheon တို႔တည္ေဆာ က္ခဲ့ေ သာဒ႐ုန္းႏွင့္ အလားတူ ဒီဇိုင္းမ်ားႏွင့္လည္းဆင္တူသည္။
ေသခ်ာသည္ကေတာ့ တ႐ုတ္ ထုတ္ျဖစ္သည့္အတြက္ အစၥေရး၊ တူရကီ ဒ႐ုန္းတို႔ထက္ ေဈးသက္ သာမည္ကေတာ့ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ပါသည္။
၂၁ ရာစုေခတ္မွာ ဒ႐ုန္းမ ရွိတဲ့စစ္တပ္ဟာ ေက်ာေ ကာ့ေအာင္ခံဖို႔သာ ျပင္ထားၾကေပေတာ့။ အသက္အပို မပါတဲ့လူေတြကို စစ္ေျမျပင္လႊတ္ တိုက္ေနရတဲ့ဘ ဝေတြကေန အျမန္ဆုံး ႐ုန္းထြက္ေ က်ာ္လႊားႏိုင္ၾကပါေစ။
Previous post မြောက်ကိုရီးယားသမ္မတ ကင်ဂျုံအန် ပြည်သူကိုေ တာင်းပန်ပြီး မျက်ရည်ကျခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်း နဲ့ နိုင်ငံရေးမျက်လှည့်များ
Next post ကျိကျိတက် ချမ်းသာသော ထိုင်း ဘုရင်၊ ၎င်း၏ အကြံအစီများနှင့် ဆန္ဒပြပွဲများ နောက်ကွယ်…